မင်းသေတာမြတ်သည် – သီချင်း… – PVTV Myanmar
မင်းသေတာမြတ်သည် – သီချင်း
Like – 6.9K Share – 1792
စိုး ႏိုင္ says:
2021-05-26 at 3:29 PM
Free and Justice will prevail soon.
Kyaw Swa Myint says:
2021-05-26 at 3:36 PM
အခုကျပြန်တော့ နှလုံးသားထဲထိ စူးစူးနစ်နစ် ထိရှမိတဲ့ စာသား၊သံစဉ်၊အဆိုပိုင်း၊နောက်ခံမှတ်တမ်းများ၊လက်ရှိကာလခံစားမှု။ဖန်းတီးသူများအားလုံးကို ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
2021-05-27 at 3:59 AM
Zaw Zaw Zaw Zaw says:
2021-05-27 at 7:29 AM
Khant Min Ko says:
2021-05-27 at 7:55 AM
ကျဆုံးခဲ့သော အာဇာနည်များအားလုံးကို အလေးပြုပါသည်။
သြယ္ ေလး says:
2021-05-27 at 10:51 AM
Aye Nyein Aung says:
2021-05-27 at 11:56 AM
အမွန္တရားအတြက္ က်ဆုံးသြားၾကတဲ့ သူရဲေကာင္း မ်ားကို ဦးၫြတ္ အေလးျပဳ ပါသည္ ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္႐ွိၾကပါေစ🙏🙏🙏
2021-05-27 at 12:31 PM
နှလုံးသား ထိနက်ရှိုင်းစွာဦးညွှတ် ပါတယ် သူရဲကောင်း အပေါင်း တို့
Sandar Wynn Aung says:
2021-05-27 at 12:36 PM
2021-05-27 at 2:10 PM
ခရစ်ယာန်သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၊ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး(15:12 – 13)တွင်သခင်ယေရှုက
2021-05-28 at 9:36 AM
အများ … ကောင်းကျိုးတွတ်
တာဝန်ကိုယ်စီ ကျေ…. ရမည် ✌️
Thet Myat says:
Aye Chan Nyein says:
2021-05-29 at 1:01 PM
February Angel says:
မြန်မာပြည် အမြန်ဆုံး Democracy ရရှိပြီး ငြိမ်းချမ်းပါရစေ။
Hannwe Yin says:
2021-05-29 at 11:34 PM
အရမ္​း​ေႂကြခဲ့ရတဲ့ သီခ်င္​း အခု​ေတာ့
2021-06-01 at 12:32 PM
ပိုင္ ပိုင္ says:
2021-06-04 at 1:27 PM
Antony Hein says:
Rest In Powers ..!